[Review] Top 10 Loại bánh kẹo Hàn Quốc ngon nhất (An Toàn) | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 10 Loại bánh kẹo Hàn Quốc ngon nhất (An Toàn) | Muasalebang in Muasalebang
Masifunde ndawonye, I-10 engcono kakhulu ye-confectionery yaseKorea namuhla Ilinganiselwe kahle, sibala futhi sihlanganise imibono yabathengi abaningi.
1 Ungakhetha kanjani i-Confectionery yaseKorea
1.1 Khetha i-Confectionery Ngokuvumelana Nendlela Yokudla kanye Nenhloso
1.2 I-Confectionery Ehlukanisayo Yokudla kanye ne-Confectionery Yezipho
1.3 Hlola Imodeli Yekhodi Yokupakisha
2 I-Confectionery yaseKorea ehamba phambili eyi-10 namuhla
2.1 2.1 Awekho Uphawu Lweqanda Amakhukhiki (250g)
2.2 2.2 Ama-Almond Sunnuts Anamakhukhiki e-Tokbokki I-almond ebabayo kanye nama-Pretzel Sunnuts (200g)
2.3 2.3 Imbewu ye-Choco Rock Chocolate Candy Sunflower Choco Rock 280gr
2.4 2.4 I-Crown Grand Shell Crown Apple Cookies (273g)
2.5 2.5 Ikhekhe le-Orion-Orion Carp
2.6 2.6 I-Lotte-Lotte Pepero Cookie Flavour (32g)
2.7 2.7 Ipulazi likaTom Ibhotela Lenyosi Ipulazi likaTom (250g)
2.8 2.8 Ikhekhe le-Lotte Lotte Custard (276g)
2.9 2.9 Ayikho I-Chocochip Yomkhiqizo Ayikho Ibhisikidi Lomkhiqizo (400g)
2.10 2.10 Ikhekhe le-Orion Traditional Orion Chocopie (420g)
Ungakhetha kanjani i-Confectionery yaseKorea
Ngokuhlukahluka nobuningi be-confectionery yaseKorea kwenza kube nzima kubasebenzisi ukukhetha. Ungakhetha kanjani ukuthi yiluphi uhlobo oluhle futhi olumnandi? Nansi indlela yokukhetha i-confectionery yaseKorea.
Khetha i-Confectionery Ngokuvumelana Nendlela Yokudla kanye Nenhloso
Ukudla okulula namantongomane, izitsha ezisemaceleni zamaphathi okuphuza
Kulabo abangathandi ukudla amaswidi, kodwa bathanda ukuphuza nge-confectionery ehambisanayo. Bese ukhetha ukudla okulula, ama-alimondi, ama-cashews, … kuyisinqumo esinengqondo kakhulu.
Ngaphandle kwalokho, ukudla okulula kwaseKorea kuvame ukuba nezinongo, ngakho-ke kulungele amaphathi okuphuza. Ngaphandle kwalokho, kunezinhlobo ezingezona izinongo ongakhetha kuzo kulabo abangakwazi ukudla okubabayo.
Ukusetshenziswa kokudla okulula, amantongomane, njll emcimbini wokuphuza ukusiza ukuguqula ukunambitheka kuyisenzakalo esifanayo esithakazelisayo lapho uphuza nabangani nezihlobo.
Ushokoledi, amabhisikidi afanele itiye, ikhofi
Lapho ujabulela itiye noma ikhofi, ukuthuthukisa ukunambitheka, ukuhlanganisa nabo ushokoledi, amakhukhi yinto okufanele uzame. Khipha itiye elicebile noma ukunambitheka kwekhofi ngaphandle kokulahlekelwa iphunga layo lemvelo.
I-confectionery ye-chocolate yaseKorea inezinhlobo eziningi, isiza amakhasimende ukuthi akhethe ngokukhululekile ngokuvumelana nalokho akuthandayo. Kodwa-ke, ikhekhe elithandwa kakhulu futhi elisetshenziswa kabanzi ngabantu baseVietnam yi-chocopie. Ngaphezu kokugcwalisa ukhilimu, ibuye ibe nokugcwaliswa kwe-Marshmallow. Udinga nje ukuya ezitolo ezinkulu nasezitolo ukuze uthenge lolu hlobo lwekhekhe.
Ikakhulukazi, lapho uphuza ikhofi, amakhukhi angacwiliswa ekhofi, okuhlangenwe nakho okuthakazelisayo. Futhi kumnandi kakhulu.
Ngakho-ke, uma ungumuntu othanda ukujabulela itiye noma ikhofi, kukhona amakhukhi kanye noshokoledi njengezitsha ezihambisanayo zokwandisa ukunotha kwetiye nekhofi.
I-confectionery yendabuko yaseKorea
I-confectionery yendabuko yaseKorea ihluke kakhulu ngezinhlobo eziningi ezahlukene njengekhekhe lelayisi, ikhekhe lezinyosi, ikhekhe lenhlanzi i-Bungeoppang …. Lezi yizitsha okungafanele ziphuthelwe lapho ufika eKorea, ungazithenga futhi njengezipho zezihlobo nabangane. Ngaphandle kwalokho, uswidi wama-elderberry waseKorea uyisidlo okufanele sizame.
I-Confectionery Ehlukanisayo Yokudla kanye ne-Confectionery Yezipho
Lapho uthenga i-confectionery, sihlukanisa ukuthenga ukudla noma ukuthenga njengezipho. Uma unikeza njengesipho, kufanele ukhethe amabhokisi ekhekhe amnandi futhi ahlanganiswe ngokucophelela.
Isibonelo, uma ukhetha izipho zesithandwa sakho esikhundleni samabhokisi alula, ungakhetha amabhokisi ekhekhe aklanyelwe imibhangqwana othandweni. Akugcini nje ngokujabula izithandani, kodwa futhi zisiza ekukhuliseni uthando phakathi kwabantu ababili.
Noma uma unohambo noma uhambo lwebhizinisi oluya e-Korea, futhi ufuna ukuthengela izingane zakho izipho, kufanele ukhethe amaswidi anamaphakheji ahlekisayo futhi amahle ukuze uwajabulise. Noma njengezipho zogogo nomkhulu, khetha amaqebelengwane athambile, adleka kalula, anokunambitheka okuthambile anamaphakeji alula.
Hlola Imodeli Yekhodi Yokupakisha
I-confectionery yaseKorea ihluke kakhulu futhi inothile ngemiklamo eminingi ehlukene yokupakisha. Ngakho-ke, lapho ukhetha, kuye ngokuthi inhloso yokusetshenziswa, khetha imodeli yokupakisha efanele. Isibonelo, uma unikeza izipho kugogo nomkhulu, ungakhetha imiklamo yokupakisha yendabuko, elula futhi engathandeki. Noma anganikeza izingane izipho, khona-ke kufanele kunikezwe kuqala ukukhetha ukupakisha okuhle nokuhlekisayo ukusiza izingane zijabule lapho zithola izipho ngezithombe zezilwane ezinhle.
Xem Thêm 5 cách lột vỏ bưởi nhanh nhất, mẹo tách múi bưởi và mẹo bảo quản | Muasalebang
Ngaphezu kwalokho, ukuhlola umklamo wokupakisha kuphinde kusisiza ukuthi sihlonze umenzi, usuku lokukhiqiza kanye nosuku lokuphelelwa yisikhathi. Ngoba emaphaketheni, umenzi uzovame ukuyiphrinta ngenhla.
Ngakho-ke, ngaphambi kokukhetha ikhasimende, kuyadingeka futhi ukuhlola umklamo wokupakisha ofanele wento ngayinye ehlukene amakhasimende afuna ukuyinikeza izipho, noma ukuthenga umndeni wabo.
I-Confectionery yaseKorea ehamba phambili eyi-10 namuhla
Ngokubhekisa eKorea, abantu abaningi bazocabanga nge-confectionery emnandi futhi ekhangayo lapho bejabulela. Imakethe ye-confectionery yaseKorea ihluke kakhulu futhi inothile ngezinhlobo eziningi ezahlukene. Ngakho-ke, lapho ufika eKorea, uzocwiliswa emhlabeni we-confectionery. Futhi hhayi eKorea kuphela, eVietnam namuhla, imakethe yamaswidi yaseKorea ingene eVietnam, futhi amakhasimende amaningi angakhetha ngokukhululekile. Nalu uhlu lwe-confectionery yaseKorea ehamba phambili eyi-10 ethandwa abantu abaningi namuhla.
2.1 Awekho Uphawu Lweqanda Amakhukhiki (250g)
Awekho amabhisikidi omkhiqizo anokunambitheka okunamafutha, asizayo ekunikezeni amandla amaningi empilweni ngezikhathi zekhefu phakathi nesikhathi sokusebenza kanzima. Ngomklamo omuhle, omncane, oyindilinga, ukupakishwa okuhlangene kulula ukukuthwala. Kuwukudla kokusiza ukulwa nendlala yabasebenzi basehhovisi nabafundi
2.2 Ama-Almond Sunnuts Anamakhukhiki e-Tokbokki I-almond ebabayo kanye nama-Pretzel Sunnuts (200g)
Kulabo abathanda ukudla okubabayo, lesi yisitsha esingaphuthelwa. Ikhekhe lerayisi elibabayo le-Tokbokki alisesona isidlo esingajwayelekile kubantu abaningi, esinokunambitheka okubabayo kwesitayela sase-Korea. Ngenhlanganisela yamantongomane, ama-crackers nama-flavour e-tokbokki.
Okumnandi futhi okubabayo ngama-alimondi anamafutha, amabhisikidi azoba isidlo esiyintandokazi kubantu abaningi. Ikakhulukazi, ngenkathi ebandayo, ukuba nephakethe lamaqebelengwane endlini kuyamnandi.
2.3 Imbewu ye-Choco Rock Chocolate Candy Sunflower Choco Rock 280gr
Ngomklamo omuhle omise okwenhliziyo. Imbewu kabhekilanga esongwe ngoshokoledi onephunga elimnandi iyisidlo esilungele abantu abaningi. Ngaphandle kwalokho, iChoco Rock enoshokoledi wembewu kabhekilanga ingasetshenziswa njenge-dessert, ifafazwe ku-ayisikhilimu noma ikhekhe.
I-Choco Rock Sunflower seed chocolate candy iyisinqumo esihle kakhulu kulabo abathanda ukudla okulula, ukwenza ukudla okulula okulwa nendlala ngesikhathi somsebenzi noma amahora okufunda.
Xem Thêm Top 4 men vi sinh của Hàn lợi khuẩn cho trẻ an toàn, hiệu quả nhất | Muasalebang
2.4 I-Crown Grand Shell Crown Apple Cookies (273g)
Ngenhlanganisela yamabhisikidi nama-apula, kuyasiza ukujabulela isithukuthezi esincane lapho ujabulela. Ukunambitheka okumnandi okuCrispy kuhlanganiswe nokunambitheka okumnandi nokumuncu kwesiraphu ye-apula ngaphakathi kuletha umuzwa wokukhanya lapho ujabulela. Ikakhulukazi, uma udla ikhekhe elihlangene nokuphuza itiye kuyinto enhle kakhulu.
2.5 Ikhekhe le-Orion-Orion Carp
Umklamo omuhle wezinhlanzi uletha ukubukeka kozwela ezinganeni kanye nakubantu abadala. Ngenhlanganisela ephelele yekhekhe elithambile, elimanzi ne-Daifuku kanye nokugcwaliswa kukashokoledi ngaphakathi. Ukuletha amandla aphelele lapho ujabulela, ukusiza ukulwa nendlala yabasebenzi basehhovisi, abafundi, nezingane.
Ikakhulukazi, lolu hlobo lwekhekhe lufaneleka kakhulu emindenini enezingane ezincane ezinesimo sezinhlanzi eziletha uthando nenjabulo ukuze izingane zijabulele.
2.6 I-Lotte-Lotte Pepero Cookie Flavour (32g)
I-Lotte Pepero stick cake iwuhlobo lwekhekhe elidumile e-Korea futhi laziswa kakhulu abathengi ngokunambitheka kanye nekhwalithi yalo. Ngenhlanganisela yezinti zekhukhi kanye ne-chocolate coating, iletha ukunambitheka okumnandi futhi inikeza amandla kumsebenzisi.
Ikakhulukazi, ngomklamo webhokisi elihlangene, kufanelekile kakhulu ukukuthwala lapho uya esikoleni, usebenza noma uphuma futhi usebenzela abathandekayo.
2.7 Ipulazi likaTom Ibhotela Lenyosi Ipulazi likaTom (250g)
Ama-alimondi noju yizithako kuleli khekhe. Lezi zithako ezimbili zibhekwa njengemithombo ebalulekile yamavithamini nezakhamzimba kubantu.
Ipulazi likaTom Ama-alimondi anebhotela ayi-snack ekhululekile. Ikakhulukazi, kumantombazane asenkambisweni yokulahlekelwa isisindo, lokhu kuyisiphuzo esingafakwa ekudleni. Ama-alimondi ama-Crispy, anephunga elimnandi nawo angukudla okulula nokudla okulula kokuhlangana kwabangane.
2.8 Ikhekhe le-Lotte Lotte Custard (276g)
Ngomklamo wangaphandle wokunethezeka, ungasetshenziswa njengezipho zabathandekayo noma ungasetshenziswa ukwenza isidlo esinomsoco, ukunikeza amandla omzimba.
I-orchid layer yegolide, ukugcwaliswa kweqanda elinephunga elimnandi kuletha umuzwa wokunethezeka nokuthokoza lapho ujabulela. Ungayisebenzisa njengesidlo sasekuseni, isidlo sasekuseni saphakathi no-ekuseni, noma i-dessert ukuze uqinisekise amandla anele usuku lonke.
Nge-Lotte, amakhekhe e-Custard awakwazi ukubambezeleka ngaphandle kokwengeza ezinqoleni zawo zokuthenga zabangane nezihlobo.
2.9 Ayikho I-Chocochip Yomkhiqizo Ayikho Ibhisikidi Lomkhiqizo (400g)
Awekho amabhisikidi e-brand chocochip ayinhlanganisela yamakhukhi kanye noshokoledi, anokunambitheka kwe-spongy crispy, ahlanganiswe ngokulinganayo nge-chocochip, afanele ukujabulela izinkomishi zetiye. Ngisho nezinkomishi zekhofi. Siza ukujabulela ukunambitheka okumnandi, okumnandi ngokuhlangana kwenkomishi yetiye nabantu obathandayo.
Ikhekhe lipakishwe ebhokisini lomlomo elibanzi futhi kulula ukulikhipha noma ukuligcina. Ngaphandle kwalokho, ihlanganiswe ngabanye ngezikhwama ezincane, ngakho-ke uqinisekiswa ngokuphelele ngekhwalithi yekhekhe ngemva kwesikhathi esithile lapho uvula ibhokisi lekhekhe. Usaqinisekisa ukunambitheka okumnandi, oku-crispy kwekhekhe.
2.10 Ikhekhe le-Orion Traditional Orion Chocopie (420g)
I-Chocopie i-Orion, le ngoma cishe ijwayelekile kubantu abaningi baseVietnam. Ikhekhe le-Orion chocopie ikhekhe elidumile futhi ngaleli khekhe lijwayeleke kubathengi baseVietnam. Isendlalelo sikashokoledi ocebile phezulu kwesipontshi esithambile kanye nokugcwaliswa kwe-marshmallow sekube umkhiqizo wezinga eliphezulu le-confectionery.
Ngaphezu kokudla ngokuqondile, ungaphinda ubeke ikhekhe ku-microwave ukuze wenze ikhekhe lishise, ungqimba olucwebezelayo luletha injabulo lapho ujabulela.
I-confectionery yaseKorea Lolu uhlobo lwekhekhe oluthandwa ngabathengi abaningi baseVietnam. Hhayi kuphela okumnandi, kodwa futhi umklamo omuhle wokupakisha ofanele izinhloso ezahlukene. Ngethemba, ulwazi olungenhla lungasiza amakhasimende aqonde kangcono i-Korean confectionery futhi enze ukukhetha okufanele. Futhi ikakhulukazi, manje abathengi baseVietnam bangakhetha i-confectionery yaseKorea ezitolo zaseVietnam.
Cách hiển thị phần trăm pin Galaxy S10, Galaxy A50/A30 | Muasalebang